Iran: Mitohy indray ny fanoherana ny Fanjakana Islamista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2009 21:51 GMT
Ny alakamisy lasa teo dia nihorakoraka tao Téhéran ny mpanao fihetsiketsehana anarivony nanao hoe: “aoka izay ny didy jadona” sy ny hoe “lehibe Andriamanitra”, mihantsy ny fanambarana navoakan'ny fitondrana fa tsy azo ekena ny fihetsiketsehana manodidina ny voka-pifidianana filoham-pirenena natao ny 12 jona lasa teo.
Natao hahatsiarovana ny fahafolo taonan'ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra nanohitra ny fitondrana islamista koa io fihetsiketsehana io. Fihetsehana nahafatesana olona iray ary naharatrana olona marobe sy nosamborina marobe koa.
Namoaka sary sy sary mihetsika tahaka ny hitantsika eto ho hitan'izao tontolo izao indray ny Iraniana.
Eo amin'ity sary mihetsika ity dia miantso ny vahoaka hoe “lehibe andriamanitra”
Eto dia arantiranty ny sora-baventy manohitra ny zanaka lahin'i Ayathollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamanei. Araka ny vaovao sasany dia izy no mibaiko ny miaramilan'ny Basji nanao herisetra tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny herinandro maromaro izay.
Eto indray dia antsointsoina ny anaran'ny lehiben'ny mpanohitra, Mir Hussein Moussavi.
Nanoratra ilay mpitoraka bilaogy Akharozaman fa nanipy entona mandatsa-dranomaso tao anaty fiarabe mpitatitra ireo mpitandro ny filaminana tany Vali Asar.
Manakiana ny BBC Persian Tv kosa ireo mpitoraka bilaogy maro tahaka an-dry The god that failed noho ny tsy fahafahany manaraka sy mitantara ny fihetsiketsehana.
Manamarina i My Opera fa ny BBC sy ireo fampahalalam-baovao mahazatra any an-toerana dia tsy dia afaka manampy ny fihetsiketsehana fanoherana any Iran izy ireo, satria sady mijery ny ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana izy ireo, no mindry ihany koa ny fampanantenana nataon'ny fanjakana Iraniana ho azy ireo.